Vitaccino Sliming Coffee - EasyAds Myanmar
9,000 Kyat (Fixed)
စျေးနှုန်း : 9,000 Kyat (Fixed)
ဝိတ်မကျမှာမပူနဲ့။ Vitaccino အဆီကျကော်ဖီ လာပါပြီ။
အညွှန်းအတိုင်းသာသောက်ပေး၊ တကယ် ကျစေရမယ်။
🙀ဗိုက်ကြီးရွဲပီး ဗက်ဘက်ဗက်လက် ဖြစ်နေလား?
😸မပူပါနဲ့။ ဒါတွေအားလုံးကို Vitaccino slim coffee မှ ဖြေရှင်းပေးမှာပါ။
🔹တစ်လအတွင်း ၁၀ ပေါင် ကနေ ပေါင် ၂၀ အထိ ကျပါတယ်။
✅သဘာဝအတိုင်း ဆီးနှင့်ဝမ်းမှ အဆီများကို ကျဆင်းစေပြီး အစားစားချင်စိတ်ကို ထိန်းချုပ်ပေးကာ ဝမ်းလျှောခြင်းမဖြစ်ပေါ်စေပဲ အဆီတကယ်ကျတဲ့ ကော်ဖီပါ။
✅အစားစားချင်စိတ်ကို လျော့ချပေးပြီး ဝမ်းဗိုက်နှင့် ကိုယ်တွင်းရှိ မလိုအပ်သော အဆီများကိုကျစေခြင်း၊ သွေးတွင်း အဆီများကို ကျစေခြင်းတို့ကြောင့် ​လေဖြတ်ရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်ခြင်း၊ အနံ့မွှေးမွှေးလေးနဲ့မို့ အဆီလဲကျချင်၊ ကော်ဖီကြိုက်သူများအတွက် အဆင်ပြေစေပါတယ်။
✅ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး လုံး၀မရှိတဲ့အပြင် အသက်အရွယ် ၁၈ နှစ်မှ အသက် ၆၀ ထိ သောက်သုံးနိုင်ပြီး အဆီလဲ တကယ်ကျတဲ့ ကော်ဖီဖြစ်ပါတယ်။
🔵Vitaccino အဆီကျ ကော်ဖီ🔵
-Weight ကျဖို့ အတွက် သိသာလွန်းလို့ လူကြိုက်များလာတဲ့ Vitaccino ကော်ဖီ
-ဆေးသောက်ရန် ကြောက်သူများအတွက် Vitaccino ကော်ဖီ
-တစ်ဘူးကုန်တာနဲ့ သိသိသာသာကို ကျေနပ်တဲ့ Result ပေးတဲ့ Vitaccino ကော်ဖီ
✅မနက်တိုင်း Coffee တစ်နေ့ တစ်ထုတ်သောက်ရုံနဲ့
ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ အဆီပို များကို အမြန်ဆုံး ဖယ်ရှားလိုက်ရအောင်။
❎သောက်ဆေး တွေလိုလည်း မပြင်းတဲ့အတွက် ရင်တုန် မူးမော် ခြင်းလည်း မဖြစ်စေပါဘူး❎
➡လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်စရာ မလိုပါ။
➡Thai Products စစ်စစ်သာ ရောင်းပါတယ်ရှင့်။
☕မနက်အစောကြီး Breakfast မစားခင် ၁၅ မိနစ်အလို တစ်နေ့ တစ်ထုပ်သောက်ပေးယုံဖြင့် ၁၅ ရက်စာ တစ်ဘူးကို ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်နဲ့ ၅ ​ပေါင်ကနေ ၁၀ ​ပေါင်အတွင်းကျပါတယ်။ (အများအားဖြင့် ၈ပေါင်လောက် ကျကြပါတယ်)☕
☕ယောက်ျားလေး မိန်းကလေး အကုန်သောက်လို့ ရပါတယ်။☕
Price – 9,000 kyats
ကဲ….အချိန်တိုတိုနဲ့ အဆိီအမြန်ကျချင်တဲ့ ကာကာလေးတို့ မင်မင်တို့ရဲ့ Messenger လေးကို အမြန် တစ်ချက် Hi လိုက်ပါနော်။
ယိုးဒယားCola 3.1 liters (December price 3200ksပါ)
NESTEA လီမွန်တီး (December price 7000ksပါ)
7,300 Kyat (Fixed)
ပျားရည်(December price 9000ksပါ)
ယိုးဒယားသစ်အယ်သီးပေါင်း(December price 1500ksပါ)
1,650 Kyat (Fixed)
90,000 Kyat (Fixed)
Desrem™ (Remdesivir) 100 mg
48,000 Kyat (ညှိနှိုင်း)
#VitaccinoCoffee #အဆီကျကော်ဖီ Vitaccino အဆီကျကော်ဖီ(လက်ဟောင်း) Made in Thailand ဝိတ်မကျမှာမပူနဲ့။ Vitaccino အဆီကျကော်ဖီ လာပါပြီ။ အညွှန်းအတိုင်းသာသောက်ပေး၊ တကယ် ကျစေရမယ်။ 🙀.ပေါင်ကြီးနေလား? 🙀 လက်မောင်းတုတ်နေလား? 🙀 ခြေသလုံးကြီးနေလား? 🙀ဗိုက်ကြီးရွဲပီး ဗက...